'Savumelana kudala ngenkontileka noMosimane'
KUSUKA kwesokunxele, ngumqeqeshi uPitso Mosimane, umengameli uPatrice Motsepe noJose Ramon Alexanko, ongumqondisi wenkulisa nokuvumbulula amakhono. Lapha kungesikhathi iMamelodi Sundowns inesithangami nabezindaba izolo ntambama eGoli, Isithombe: BACKPAGEPIX
BESE siside isikhathi kukhulunywa ngokuthi ngabe uPitso Mosimane uzohlala yini kwiMamelodi Sundowns njengoba inkontileka abenayo ibiphela ngoJuni kodwa izolo umengameli wamaBrazilians, uPatrice Motsepe ememzela ukwelulwa ngeminyaka emine kwenkontileka kaJingles, umfanise oSir Alex Ferguson owahlala iminyaka kwiManchester United, edla izicoco.
“IMamelodi Sundowns yelule inkontileka yenhloko yabaqeqeshi ngeminyaka emine. Ngijabule kakhulu ngokuthi ibhodi isinqumile ngoSir Alex Ferguson wethu,” kusho uMotsepe.
Ngijabule kakhulu, ngokwami bengingamnika ngisho iminyaka eyisishiyagalombili kodwa ekugcineni kumele ushiyele abantu ithuba lokuthi bakhule. UPitso angahamba ayoqeqesha ezingeni eliphezulu kunaleli kodwa okwamanje sizomgcina lapha."
ISundowns yelule inkontileka kaMosimane https://t.co/nPyfUIQ2FG
— Malibongwe Mdletshe (@Malbingo) May 21, 2020
UMosimane noMotsepe bavumelene ngokuthi imininingwane yenkontileka iyimfihlo ephakathi komqashi nomqashwa kodwa okucacile wukuthi lesi sikhulu besizimisele ngokumnikeza noma yini ayidingayo uMosimane ukuze ahlale.
UMotsepe uthe umthanda ukufa uMosimane futhi bona bobabili kade bavumelana ngokuthi uzohlala eChloorkop.
“Akukaze kube nenkinga ngokuthi uPitso uzosayina noma cha. UPitso weza kimina nyakenye wathi ‘ngiyazi ukuthi ufuna ngikhulele lapha kwiSundowns nami ngifuna ukuqhubeka lapha eqenjini’.
"Emqondweni wami akukaze kube khona ukungabaza, wukuthi kudingeke ukuthi silandele imigudu efanele yezingxoxo. Ibhodi yangibonisa kwathatha isikhathi eside. Ngimkhonzile uPitso. Awukwazi ukukhokhela uPitso ayekuthola ngesikhathi eqala lapha, nayekuthola ngaphambi kokunqoba iChampions League.
"Isenti nesenti esizolisebenzisa kuPitso lizobe limfanele. Ukube iSundowns ibingamdingi uPitso ngabe kade samtshela.
"Ukube uPitso ubengasafuni ukuba lapha ngabe kade samkhululula,” kuchaza uMotsepe. Uthe abakubhekile eminyakeni ezayo yinkanyezi yesibili etholakala ngokunqoba iCAF Champions League.
UMosimane ufike kumaBrazilians ngo-2012 wanqoba izicoco ezine zeligi, ezimbili zeTelkom Knockout, iNedbank Cup, iChampions League neseCAF Super Cup.
“Kuyangijabulisa ukuthi ngigcine ngisayinile eqenjini. Ngibonga umengameli, ibhodi ngokuphinde bangithembe ngeqembu. Ngibonga nethimba labaqeqeshi, abadlali abalandeli, nomndeni wami.
"Kule minyaka emine ezayo sizophinde sizikhandle ukuze sifinyelele ezingeni elingaphezulu, njengoba sisho nesiqubulo ukuthi ‘Sky is is the limit’. Kukhulu kuseza. Sisazojabulela ezinye izindebe. Lapha kwiSundowns ngeke size sime kuze kube sithola inkanyezi yesibili,” kusho uMosimane.